Wednesday May 23, 2018 - 07:17:04 in Wararka by Super Admin
Mid kamida wasiirrada dowladda Denmark ayaa jeedisay hadal ka dhan ah jaaliyadda muslimiinta ee kunool wadankaasi.
Wasiiradda Soo galootiga Denmarka ayaa weerar dhanka ah Afka ah ku qaadday dadka muslimiinta ee wadanka looga tira badanyahay, iyadoo lahadlaysay wargeys Maxalli ah ayay ugu baaqday muslimiinta in ay fasax ka qaataan shaqooyinka inta lagu guda jiro bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Engie Stoiberg oo ah wasiiradda Dadka soo galootiga ah ayaa muslimiinta Sooman ku sifeysay kuwa halis gelinaya shaqada iyo waxsoo saarka wadanka "Muslimiinta waxaan ugu baaqayaa in ay fasax ka qaataan shaqooyinka inta lagu guda jiro Bisha Ramadaan si looga fogaado dhibaato soo gaarta bulshada Denmark" ayay tiri wasiiraddan cunsuriyadda ah.
Haweenaydan oo caan ku ah islaam naceybka ayaa xubin ka ah Xisbiga Midigta Xagjirka ah ee U ololeeya in muslimiinta laga saaro Qaaradda Yurub, Engie Stoiberg ayaa iyadoo hadalkeeda sii wadata tiri "waxaan ka cabsi qabaa in Soonku dhib ugeysto Nabad gelyada iyo wax soo saarka".
Hoggaamiyaasha Muslimiinta wadanka Denmark ayaa si kulul ucambaareeyay warka kasoo yeeray Wasiiradda soo galootiga Denmark waxayna xukuumadda ugu baaqeen in ay ka hadasho warkan cunsuriyadeed ee kasoo yeeray Engie Stoiberg.
Inta badan wadamada Iskaandaneefiyaanka loo yaqaan ee qaaradda Yurub waxaa jira xisbiyo siyaasadeed oo caan ku ah islaam naceybka balse badanaa xilal waaweyn kama hayaan dowladaha inkastoo ay kujiraan golayaasha baarlamaannada iyo wasiirrada.
Qaraxyo Ciidamo lagula Beegsaday duleedyada Magaalooyinka Boosaaso iyo Kismaayo.
Dowladda Imaaraadka Oo Ciidamo dheeraad ah kala baxday dalka Yemen [Warbixin].
Weerarkii Hotelka Cas-Caseey Oo Soo Idlaaday iyo Ku Dhawaad 40 Ruux Oo Lagu Dilay [FAAHFAAHIN].